Martech Zone: Technorati တွင်နံပါတ် ၁ အဆင့် Martech Zone
စနေနေ့, သြဂုတ်လ 4, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဒီနေ့မနက်မှာ Technorati မှာရှိတဲ့ရှေးဟောင်းလူတွေကိုသူတို့ဆီမှာပြproblemနာရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအီးမေးလ်ပို့လိုက်တယ်။ ပြဿနာ? Martech Zone Technorati တွင်နံပါတ် ၁ နေရာတွင်ရှိသည်။ မဟုတ်ပါ။ နံပါတ် ၁ လို့ပြောပေမယ့်ကျွန်တော်ဟာထိပ်တန်းစာရင်း ၁၀၀ ထဲမှာမပါဝင်ပါဘူး။
ပြtheနာကိုအတည်ပြုခြင်း - ယောဟနျသ Chow Technorati တွင်နံပါတ်တစ်နေရာတွင်ရှိသည်။
UPDATE - စာမူရေးသားနေစဉ်ပြtheနာကိုလွန်ခဲ့သောမိနစ်အနည်းငယ်ကဖြေရှင်းခဲ့ပုံရသည်။
သြဂုတ်လ4ရက် 2007 ခုနှစ် 8:29 နာရီ
ဩ – ကျွန်တော် နံပါတ် 1 အဆင့်ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘလော့သမိုင်းမှာ ဝမ်းနည်းစရာ အခိုက်အတန့်ပါပဲ။ ဒီနေ့ နံပါတ် 1 ဖြစ်ရတာ ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်လဲ။ 🙂
သြဂုတ်လ4ရက် 2007 ခုနှစ် 9:41 နာရီ
အခုတလောမှာ ကျွန်တော်တို့ကို ဘယ်လောက်မျှဝေပေးလဲဆိုတာ သိချင်နေပါတယ်။ ကောင်းတယ်!
သြဂုတ် 6, 2007 မှာ 11: 00 AM
ဟုတ်တယ်- မင်းရဲ့ဂုဏ်ကျက်သရေအခိုက်အတန့်ကို ငါဖမ်းမိသွားတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ဖြစ်လာဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
သြဂုတ်လ6ရက် 2007 ခုနှစ် 12:13 နာရီ
Technorati မှ အပ်ဒိတ်-